कश्मीरबासी कर्फ्यु तोड्दै सडकमा उत्रिए ! - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
कश्मीरबासी कर्फ्यु तोड्दै सडकमा उत्रिए !
एजेन्सी । भारत सरकारले गत सोमवार जम्मू-कश्मीर राज्यलाई विशेष दर्जा दिने संविधानको धारा ३७० खारेज गरेपछि नयाँ बहस शुरु भएको छ। भारत सरकारले जम्मू-कश्मीर राज्यलाई विशेषाधिकार दिने संवैधानिक प्रावधान खारेज गरिदिएर त्यहाँ धारा १४४ लगाएपछी स्थानीय स्तरमा थप असन्तुष्टि बढेर गएको छ ।
भारत प्रशासित कश्मीरका साथै जम्मुको पुन्छ, राजौरी, डोडा र किश्तबाड इलाकामा शुक्रबार ठूलै प्रदर्शन गरिएको भिडियो बीबीसीले सार्वजनिक गरेको छ । धारा १४४ अनुसार ४ जनाभन्दा बढी मानिसलाई सामूहिक रुपमा हिंडडुल गर्न निषेध छ ।
धारा १४४ मात्रै लगाइएपनि जम्मु काश्मीर क्षेत्रमा कर्फयू लागेको भान पर्ने अवस्था छ । सरकारले इदको समयमा प्रतिबन्धलाई फुकुवा गर्दै जाने समेत बताएको थियो । यद्यपि जुन ठाउँमा अक्सर विरोध प्रदर्शन हुने गरेको थियो ती स्थानमा सख्त नाकाबन्दी भइरहेको छ ।
यसबाट महसुस भयो कि भारत सरकारको फैसलाबाट यहाँका मानिस सन्तुष्ट छैनन् । अहिले काश्मीरमा जुन हालत छ अर्थात् कर्फयुको अवस्था सिर्जना भएको छ, त्यो स्थानीय बासिन्दाका लागि नयाँ कुरा होइन । उनीहरुलाई यस खालको गतिविधि यसअघि पनि भोग्दै आइरहेका छन् । यसभन्दा अघि घाटीमा कर्फयु लाग्दै आइरहेको छ । यसपटक फरक यो छ कि घाटीमा प्रतिबन्धका साथै विवशता पनि देखिएको छ । यसको कारण महबुबा मुफ्ती र उमर अब्दुल्लाह नै विवश देखिएका छन् । यो पनि भनिदैछ कि यी नेताका जो कार्यकर्ता थिए उनीहरुलाई आग्रामा पठाइएको छ ।
बीबीसीले जम्मु काश्मीर प्रहरीसँग कुराकानी गर्दा उनीहरुले जम्मु कश्मीर प्रहरी र सीआरपीएफ सदा झैं मिलेर काम गरिरहेको बताए । यद्यपि प्रहरीको भनाइमा यो पटक सीआरपीएफको रबैया केही बदलिएको छ । श्रीनगरको सौरामा जुन प्रदर्शन भयो त्यसमा पनि जम्मु कश्मीर प्रहरीकै तर्फबाट फाइरिङ भएको थियो । जबकि सीआरपीएफले ती प्रदर्शनकारीलाई तीन वटा नाकाबाट निस्कन दिएको थियो ।